ABIN: 'TPLF waliin adda tokko ta'anii hojjechuun ADP waliin hojjechuurraa nu hin dhorku' - BBC News Afaan Oromoo
ABIN: 'TPLF waliin adda tokko ta'anii hojjechuun ADP waliin hojjechuurraa nu hin dhorku'
Dhaabbileen siyaasaa maqaa Amaaratiin ijaaramanii socho'an dantaa saba Amaaraa eegsisuuf waliin ta'anii hojjechuuf akka waliigalan Sanbata darbe beeksisaniiru.
Paartileen siyaasaa waliigalan kun Sosochii Biyyaaleessaa Amaaraa(ABIN), Amaaraa Dimokiraatik paartii (ADP)fi dhaabbilee biroo shanidha.
Waliigaltee tolfatan kanarrattis, faayidaa uummata Amaaraa irratti karoora gabaabaafi dheeraa qopheeffatanii hojjechuu, humna walbuusuurraa of qusachuu akka qaban kaawwataniiru.
Dhaabni ABIN yeroo hedduu dhaabni naannoo Amaaraa bulchu kan naannoo Tigraay bulchu waliin hojjechuu hin qabu jechuun balaaleeffata.
ADP'n Obbo Damaqa Makooninii dura taa'aa taasisuun filate
Kana ta'ee wayita jirutti amma bu'uura maaliin akka waliigalan dura taa'aan dhaabichaa Dr. Dassaaleeny Caannee BBCtti himaniiru.
Akka Dr. Dassaaleeny jedhanitti waligalteen isaanii waliin dhaabachuu, ajandaa waloo qabaachuu, qindoomina uumuu, adda tokko hundeessuu, sagantaalee gidduu-galeessaa ummachuu miti.
"Qindoomina uumuu ykn adda tokko ijaaranii waliin hojjechuudha jechuun namootni haasa'an jiru sun dogoggora," jedhu.
Seenaa darbe yoo ilaalte ADP'n dhaaba namoota ilaalcha jibba Amaaraa qabaniin hoogganamaa ture kan jedhan Dr. Dassaaleeny, waggaa darberraa eegalee garuu dhaaba kana keessa hooggantoota dantaa Amaaraaf hin amanaman jedhaman of keessaa qulqulleesseera jechuun ibsu.
"Namoota aantummaa Amaaraaf quuqama qaban calaqqisuu danda'an gara fuula duraatti haalli itti fide waan jiruuf jijjiirama kana akka gaariitti hubanna."
Lammaffaa ammoo, ajandaawwan bu'uura qabsoo Amaaraati jennee kaneen adda baasnes hedduu isaanii ADP'n fudhatama argataniiru akka dura ta'aa ABIN kanaatti.
Dhimmoota kanarratti walitti dhiyeenyi erga jiraatee, waliin akka hin hojjenne wanti nu taasisu hin jiru jedhaniis amanu.
"Kana jechuun garuu ammas ADP'n parsantaa dhibba dandeettii qaba, ummata Amaaraaf dhaaba amanamaadha gamaaggama jedhurraa miti."
Akkamiin dhaabbileen kunneen amma walii galan jechuun BBC'n Waajjira Gidduu-galeessaa Paartii Dimookraatawaa Amaaraa(ADP)tti Itti-gaafatamaa dhimmoota siyaasaa kan ta'an Obbo Teteekkaa Baqqalee gaafateera.
Yeroo kanatti dhimma Itoophiyaarratti qaamoleen garaagaraa fedha adda addaa qabu. Addatti ammoo yeroo dheeraaf irratti karoorsanii ummata Amaaraafi Itoophiyummaarratti qaamoleen ajandaa qaban jiru akka Obbo Teteekkaatti.
"Gama tokkoon, mankaraarsitootni sabboonummaa, Itoophiyaas Itopohiyummas ija shakkiin ilaalan.
Gama biraan ammoo sababa alaa barbaadanii humnoonni tokkummaa keessoo isaanii itti fufsiisuu barbaadan takka takka dhuunfaan yeroo biraa ammoo gareen haleellaan raawwatamu jira."
Kanaaf haala qabatamaa kan ilaalcha keessa galchuun maqaa Amaaraatiin humnootni gurmaa'an, humna isanii walitti qabuu qabu qamoleen jedhan hedduudha jedhan Obbo Teteekkaan.
"ADP' kanatti sirriitti amana. Fedha uummata Amaaraa itti fufiinsaan mirkaneessuuf, haleellaa irraa ittisuuf, rakkoorraa eeguuf humna ijaaranii ejjennoo jedhu qabna.
Waamichi kuni duras yaada keenya waan ta'eef osoo bitaa mirga hin jedhiin fudhanne."
Paartileen Amaaraa kunneen kallattii siyaasaa waloo falachuuf kan walii galani yoo ta'u, kun ammoo gaaffiileen siyaasaa ummataa karaa ifa ta'een kaa'uu, galma yeroo gababaafi dheeraa tolfachuun waliin hojjechuuf waliigalteerra gahamuu dubbatan Dr. Dassaaleeny Caannee.
Gama siyaasaan kan irratti waliigalan keessaa tokko paartileen sochii kamuu keessatti maqaa walballeessuufi wal xureessuu, yakkamaa waltaasisuurraa of eeggachuudha.
Akkasumas, dorgaggoota waliin ta'uudhaan kallattii qabsiisuu, filannoon itti aanuu naga qabeessaafi dimokiraataawaa akka ta'uuf waliin hojjechuurratti waliigalaniiru.
"Aadaa paartilee siyaasaa waltakaaluufi wal ajjeesuu kanaan dura ture kan hambisudha. Haala amma jiruun paartileen siyaasaa naannoo Amaaraa keessa socho'an garaa garummaa guddaas hin qaban," jechuun dubbatan Obbo Teteekkaan.
Waldhaibdee ADP waliin qabanin alattis, jibbinsa TPLF waliin qaban yeroo baayyee dubbatan ilaalchisee ni ibsu dura ta'aan kun.
ADPn yeroo ammaa TPLF waliin akka adda tokkootti waliin hojjetu. ABIN garuu TPLFn ni balaalleffata.
Dr. Dassaaleeny, kun ADP waliin hojjechuu akka isaan hin dhowwine himu. "ADPfi TPLF miseensa ADWUItti paartii obbolaa ta'uudhaan waggoota dheeraadhaaf waliin kan hojjetan ta'ullee, yeroo dhiyoo asitti garuu ifatti walmormuun isaanii mul'ataa jira," jedhan.
Kanaaf, TPLF waliin adda tokko jala jiraachuun ADP waliin hojjechuurraa nu hin dhorku jedhan.
Kana waliin walqabsiisuunis paartileen miseensa ADWUI walitti baquuf karoorfatan keessaa TPLF carraan keessaa hafuu isaa bal'aadha jedhu Dr. Dassaaleny.
Kun ammoo "ADPn gara gaaffii ummata Amaaraatti dhiyaataa jiraachuu agarsiisa. Kanaaf, walitti dhufeenyi ADP waliin qabaannu gara fuula duraatti kan nu deemsisu ta'uu agarsiisa."
Paartiin Amaaraa TPLF waliin adda tokko jalatti hojjetu waliin hin hojjennu jechuun, ofirraa sababii itti dhiibnuuf hin qabnu," jedhan.
Paartiin Dimokraasummaa Amaaraa miseensota koree giddugaleessaa haaraa filate
Amaaraa: Naannoon Amaaraafi Sochiin Humnoota Dimokraatawa Amaaraa waliigaltee mallatteessan